पर्यटन व्यवसाय प्रविधिमैत्री बन्दै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पर्यटन व्यवसाय प्रविधिमैत्री बन्दै
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्ष्य गरी कर्मचारीका लागि ‘डिजिटल मार्केटिङ तालीम’ सञ्चालन गरेको छ।
नाट्टाले प्रदेश १ को इलाम, धरान, विराटनगर र भद्रपुर, प्रदेश ५ को बुटवल, पाल्पा, लुम्बिनी, रुपन्देही र भैरहवा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा तालीम सञ्चालन गरेको हो।
नाट्टाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको समापन कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले पर्यटकीय क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए।
‘सन् २०३० मा प्रत्येक देशमा हाल भइरहेको पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर पु¥याउन सरकार र व्यवसायी लाग्नुपर्छ’, उनले भने। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायी र सरकार प्रविधिमैत्री बन्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
नाट्टाका अध्यक्ष सिएन पाण्डेले विश्व डिजिटल प्रविधिमा जोडिएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई प्रविधिको क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि गरी समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढ्न तालीमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नाट्टाका महासचिव रमेश थापाले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाए मात्र बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने बताए। समापन कार्यक्रममा देशभरका २६० भन्दा बढी प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको थियो।